Ol olaha Qalitaanka iyo Daawaynta Indhaha oo Ka bilowday Dhagaxbuur. - Cakaara News
Ol olaha Qalitaanka iyo Daawaynta Indhaha oo Ka bilowday Dhagaxbuur.
Dhagaxbuur(CN) talaado, 5ta January, 2016, Waxaa ka bilaabmay cisbitaalka magaalada dhagaxbuur Wareegii 2aad ee ol-olaha qaliinka iyo daawaynta indhaha oo ay fulinayaan koox dhakhaatiir ah oo u dhalatay DDSI kuwaasi oo kaashanaya xukuumada DDSI.
Kooxdan dhakhaatiirta ah ee ka bilowday magaalada dhagax buur qaliinka iyo daawaynta indhaha oo uu hogaaminay Dr Cabdicasiis Ibraahin ayaa waxa ka faa’iidaysanaya ol olahan qaliinka iyo daawaynta indhaha 2,000 oo qof oo ku nool magaalada dhagax buur iyo nawaaxigeeda kuwaasi oo iskugu jira kuwo lagu fulinayo qaliinta indhaha, daawaynta indhaha iyo daawaynta fudud ah oo muraayada loo galinayo indhaha.
Hadaba maareeyaha hospitaalka dh/buur Mudane Siyaad Nuur Cabdi ayaa sheegay in dadka labaadhay ee indhaha ay tiradoodu dhantahay 2000 oo qof , waxa uuna mareeyuhu cadeeyay in dad tiradoodu dhantahay 300 oo aan hada kahor wax arkaynin indhaha loofiiqay, sidookalana 200 oo qof ukiyaala lasiiyay meesha 200 oo qofna loo samayay in xiribaha lookaro (tracoma) meesha 300 qofna daawooyin lasiiyay.
Ugudabayna Waxa uu masuulku hadalkiisii ku gabagabeeyay in Daawaynta iyo qalitaanka ay samaynayaan dhakhaatiirtu uu socon doono ilaa 2-5-2008 T.I.
Waxaa kale oo xusid mudan in ay kooxdan dhakhaariirta ah oo kaashanaysa xukuumada DDSI ay wareegii koowaad ee ol-olaha qaliinka iyo daawaynta indhaha ka fuliyay degmooyinka mid ah gobolada deegaanka kuwaasi oo dadwayne aad u tiro badan u soo celiyay aragoodii. Waxaana si wayn u soo dhaweeyay daawaynta iyo qaliinka ay ku deeqeen kooxdan dhakhatiirta iyo xukuumada DDSI qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka.